Indonezia : Niteraka Setroka Matevina Nandoto Ny Rivotra iainana Ny Doro Ala Tany Riau · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Marsa 2014 23:07 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Nederlands, Español, Français, Italiano, English
Ala may any Riau, Indonezia. Sary avy amin'i Virna Puspa Setyorini, Fizakàmanana @Demotix (6/20/2013)
Niha-nahery vaika ny doro ala tany amin'ny faritra andrefan'i Indonezia tamin'ity volana ity ka nanohina ny mponin'i Riau, Andrefan'i Sumatra sy Avaratr'i Sumatra. Nampangaina ho niteraka setroka matevina any amin'ny manodidina an'i Singapore sy Malezia koa ilay ala may.
Nitombo maherin'ny 2.000 ireo faritra kilan'ny afo tamin'ny fiandohan'ity volana ity. Nandraraka sira enina taonina teny ambonin'i Riau mba handrotsahana orana amin'ny velaran-tany 13.000 hektara main'ny afo ny governemanta mba hifehezana ny afo.
Niha-naloto ny rivotra iainana, indrindra tao Riau, izay noheverina fa ‘teboka aotra niandohan’ ny loza nateraky ny setroka. Mponina maherin'ny 33.300 sahady ao Riau no efa marary taovam-pisefoana noho ny setroka amin'izao fotoana izao. Marobe amin'ny mponina izao no fantatra, hatramin'ny zaza, fa misohika sy mikohaka.
Vokatry ny fandoroana ankitsirano ataon'ireo orinasa manao fambolena ao anaty ala no nahatonga ny afo. Ampangaina ihany koa ireo tantsaha vaventy ho isan'ny miteraka ny doro ‘tsy misy farany’ ny ala noho ny fomba fiasàny ny tany hamboleny mandoto ny tontolo.
Hazavain'ny Filoha Indoneziana, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) fa sady loza voa-janahary no loza ataon'olombelona ny fandoroana ny ala :
Tsy ny toetrandro migaingaina tafahoatra ihany no mahatonga ny afo sy ny setroka fa vokatry ny ataon'ny olona sy ireo orinasa izay manandrana mandoro ny tany. *SBY*
Mety ho tratran'io afo amin'izao fotoana izao io ihany koa ny tahirin-tsolika any Indonezia satria any Riau no misy ny 30 ka hatramin'ny 40 isan-jaton'ny famokaran-tsolika nasionaly.
Hakitroky ny afo any Riau, Indonezia. Sary avy amin'ny World Resources Institute
Ireto tenifototra ireto : #PrayForRiau, #MelawanAsap, ary #RiauHaze no ampiasain'ireo Indoneziana mpiserasera amin'ny Twitter mba hanaraha-maso akaiky ny fivoaran'ny setroka sy ny afo :
Aloha sy aorian'ny ny riau. #PrayforRiau (MivavahaHoan'iRiau) ny tsirairay. Manantena oram-batravatra any Riau. amen. pic.twitter.com/GQgC3a8eci
Ahoana no ahafanatsika miaina ato amin'ity tanàna ity ? Azafady (MivavahaHoan'iRiau) #PrayForRIAU #MelawanAsap cc: @delpieroale @delpieroINA @juventusfc pic.twitter.com/YoFfZOrAtv
#MelawanAsap Aza miato mandra-pandrain'ireo orinasa ireo ny andraikitra. Raha miato isika dia ho toy izao ihany amin'ny taona ho avy.pic.twitter.com/AH0450xAiG
ITY NO TSY AMPY AMINTSIKA! RIVOTRA MADIO TAHAKA ITY! FA TSY TAHAKA ITY! #PrayForRiau pic.twitter.com/05ApdXeZoJ
Fantatro ny hamafin'ny miaina amin'ny toerana ratsy fepetra iainana fa tsy afaka mankaiza ianareo satria tsy mahita na inona na inona any ivelany#PrayForRiau
Mendrika ny hahazo valisoa toy ny tanàna n°1 manana ny setroka faran'izay mampidi-doza eto an-tany sy ny tsy fanamelohan'ny Filoha izany izahay .#RiauHaze
5% fotsiny ny oksizena. Toe-draharaha mampatahotra be ity #PrayForRiau
Tsy sitrapon'ireo Andriamanitra izao fa asa tanan'ireo olona tsy mandray andraikitra. #PrayForRiau
RT @OngDedy: Ndeha hataontsika ho Olana Iraisam-pirenena io. Mila mivondrona isika HAMPIATO an'io. #PrayForRiau … http://t.co/xQbv21JUCq